China Golf alu.Igumbi lokuphumla eliphindwe kabini Imveliso kunye neFactory |Tailong
Igalufa ayi.igumbi lokuhlala kabini
IGolf Double Daybed ngumdlalo omangalisayo kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezibamba izibini ezininzi okanye iintsapho.Yakhiwe ngesakhelo se-aluminium esomeleleyo kwaye ifakwe umqamelo wesihlalo esithambileyo nesitofotofo, okwangoku, ukudibanisa uyilo olulula kunye nolwanamhlanje "i-C-shape" yetafile esecaleni kunye ne-daybed ukufikelela ngokulula kwisiselo osithandayo okanye imagazini eya kukukhapha ngolonwabo kwezo zinde. iintsuku zasehlotyeni ukonqena.
Igalufa ayi.kabiniindawo yokuphumla
HUlwakhiwo lwe-aluminiyam ekumgangatho we-igh, yomelele kwaye yomelele, kwaye inesitulo sokuphefumla esinesakhono sokuphefumla ukuze ukwazi ukonwabela umoya opholileyo ngokupheleleyo ukuze ufumane inkxaso epholileyo.
Bopha izinto zokuzibopha kwikhava yomqamelo ukuze uncamathele kwindawo yokuphumla ngokukhuselekileyo ngeteyiphu yeVelcro.Lungisa i-backrest ngokulula ukuya kwiindawo ezintlanu ezahlukeneyo ukuseta kwi-engile efanele.Gcoba ngasemva okanye ulale phantsi ngokupheleleyo.
Tshatisa kunye namavili ama-2 amancinci amnyama kumacala omabini edaybed ekuvumela ukuba uhambise indawo yokuphumla ngokulula ngaphandle kokuzitsala nzima.Nokuba ibekwe naphi na, ifana nobugcisa obufana nokubakho.
Indawo yokuphumla yeGalufa kabini
ILounge ephindwe kabini
*Umgangatho ophezulu wesikhumba wePU wangaphandle
* Umbala wesikhumba wePU unokwenziwa ngokwezifiso.
* Amavili eplastiki amabini
Indawo yokuphumla egalufa kabini
* Ukuphumelela uvavanyo lwe-SGS ngo-2021.
Umboniso weGolf Lounge ephindwe kabini
ILounge emhlophe yekhephu ephindwe kabini
Ngaphambili: Itheyibhile yolwandiso lwealps ngesandla (Teak top)
Okulandelayo: Isitulo sokutyela sentambo saseBelgium
Raja aluminiyam lounge
Raja kabini daybed
Ixesha le daybed
Imvula yasemini enekhethini
Imvula yasemini enephaneli